IKomishoni YaseBulgaria Ikhupha Isohlwayo Kuba Becalulwa Ngenxa Yonqulo
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISpanish Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiArmenia IsiBhulu IsiChichewa IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiHungary IsiJamani IsiKinyarwanda IsiKorea IsiLithuania IsiMalagasy IsiNgesi IsiNorway IsiPhuthukezi IsiPhuthukezi(sasePortugal) IsiPolish IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiSlovak IsiSlovenia IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTurkish IsiUkrainian IsiXhosa IsiYoruba
AmaNgqina kaYehova aseBulgaria aye oyisa ngokuphawulekayo kangangokuba afumana inkululeko yokukwazi ukuthetha nekhusela mntu ngamnye nezinye iintlangano ekucalulweni ngenxa yonqulo. IKomishoni YaseBulgaria Ekhusela Abantu Ekucalulweni ifumanise ukuba esona sitishi seTV sibukelwayo iSKAT TV noonondaba baso ababini basasaze ngabom ubuxoki ngamaNgqina kaYehova baza bakhuthaza nokuba abethwe kanobom. Le Komishoni ide yathi esi senzo seSKAT TV “asithetheleleki.”
Amajelo Eendaba Akhuthaza Ukuthiywa Konqulo Nogonyamelo
Izitishi zeTV zaseBulgaria zimane zidlala iinkqubo ezinobuxoki ngamaNgqina kaYehova. Oonondaba beSKAT TV baye ngokuchuliweyo bathetha ubuxoki ngamaNgqina baza bakhohlisa abantu ukuba bacinge ukuba amaNgqina anetyala lokwaphula umthetho. Ezi nkqubo ziye zadlalwa kulo lonke elaseBulgaria ibe ziye zavela nakwi-intanethi.
Ezi nkqubo ziye zabangela ukuthiywa nokuphathwa kakubi kwamaNgqina. Kwinkqubo yeTV kaMeyi 2011, iSKAT TV yaxhasa ukuhlaselwa kwamaNgqina kaYehova neHolo yoBukumkani (indawo yawo yokunqulela) kwisixeko saseBurgas. AmaNgqina ayedibene esenza isikhumbuzo saminyaka le sokufa kukaYesu xa kwambonzeleka iqela labantu kuloo holo laza labetha kanobom abantu ababelapho. Amahlanu kuloo maNgqina asiwa esibhedlele ngenxa yokwenzakala. Inkqubo yesitishi iSKAT TV yakhuthaza ukuba ahlaselwe ngale ndlela amaNgqina ibe iinkqubo ezalandelayo zazisithi afanelwe kukuhlaselwa. *
Emva kwezi nkqubo, kwabakho iingxelo ezininzi zokuhlaselwa kwamaNgqina nokonakaliswa kweeHolo zoBukumkani zawo eziliqela. Kwezinye iindawo, oomasipala basekuhlaleni bade babeka imithetho eyayisebenza kuloo mimandla kuphela eyayithintela umsebenzi wamaNgqina.
AmaNgqina akwiHolo YoBukumkani eBurgas
IKomishoni Ikhupha Isohlwayo Ngenxa Yokutyeshelwa Komthetho Nokucalulwa Kwamalungelo Onqulo
NgoFebruwari 2012, amaNgqina kaYehova afaka isimangalo kwiKomishoni, emangalela iinkqubo ezintandathu zeSKAT TV ezivele kwiTV ngo-2010 nango-2011. AmaNgqina athi, kwiSKAT TV kuthethwe kakubi ngawo ibe ukusasazwa kakhulu kwezi nkqubo kubangele ukuba abe sezingxakini aza athukwa. Baphinda bathi baye bacalulwa ngenxa yezi nkqubo.
NgoJanuwary 25, 2016, iKomishoni iyonke yagqiba ekubeni ixhase amaNgqina kuba yafumanisa ukuba iSKAT TV noonondaba bayo ababini baye bawaphatha kakubi amaNgqina kaYehova ngokuwatyhola ngezinto ekungekho bungqina bazo. IKomishoni yaphawula ukuba ezo nkqubo zintandathu bezicalula amaNgqina kaYehova ngenxa yonqulo ibe loo nto iye yalithoba izinga eliphakamileyo loonondaba.
Xa ibikhupha isohlwayo, iKomishoni ithe “onke amalungu akolu nqulo aye aphathwa ngendlela engafanelekanga nengekho semthethweni, loo nto ithetha ukuthi aye aphathwa kakubi.” Emva kokuchaza ukuba asikho isiqinisekiso sokuba inkululeko yokuthetha iza kufumaneka kodwa yindlela nje yokuphelisa inkohlakalo, iKomishoni yathi “isenzo sabamangalelwa asithetheleleki.”
IKomishoni yagqiba kwelokuba izityholo ezabekwa kumaNgqina kaYehova zazinzulu. Yacaphuka isakufumanisa ukuba iSKAT TV noonondaba bayo bayazikhanyela izinto abazenzayo ibe yathi mabavume ukuba bonile. Ukuze kucace ubunzulu bezinto abazenzayo, iKomishoni yabayalela ukuba bahlawule ngaphezu kokuqhelekileyo.
Izenzo Ezincomekayo Zilungisa Umonakalo
AmaNgqina ayincoma iKomishoni ngenxa yokuwathethelela xa kwathethwa kakubi ngawo ngoonondaba. Ngaphezu koko, ekubeni amaNgqina kaYehova ebekwa izityholo ezifanayo nangamanye amajelo eendaba eBulgaria, esi sigqibo siza kuba sisilumkiso kuloo majelo ukuba angaphindi atyhole aze athethe kakubi ngamaNgqina.
UKrassimir Velev osisithethi samaNgqina kaYehova eBulgaria uthi “Akho mntu ungathanda ukuba kuthethwe kakubi ngaye kwiTV, ibe nathi ke asithandi. Ekubeni abantu baseBulgaria sebeve inkcazelo elahlekisayo, kubalulekile ukuba beve eyona nyaniso ngamaNgqina kaYehova ibe siyavuyiswa yinto yokuba iKomishoni ilungise izinto.”
^ isiqe. 5 NgoJulayi 8, 2015, kwilinge layo lokutyhola nokuthiya amaNgqina kaYehova iSKAT TV yaphinda yabonisa ividiyo yokubethwa kwawo kanobom nto leyo eyenzeka ngoAprili 17, 2011.
Fumana ushwankathelo lweenkolelo zethu ezisisiseko eziyi-15.
Yintoni Eyenzekayo EHolweni YoBukumkani?